ट्राभल एजेन्सी Premnitz रथेनो ☀️ ब्रानडेनबर्ग 1998 XNUMX पछि
होटल प्रस्ताव गर्दछ
क्याम्पर - मोटरहोम खोज अनलाइन
जर्मनीमा छुट्टी - संघीय राज्यहरू
AIDA अन्तिम मिनेट
तालिकाबद्ध उडान बुक गर्नुहोस्
एक चार्टर उडान बुक गर्नुहोस्
अनलाइन चेक इन
फुटबल यूईएफए यूरो २०२०-२०१२
ओलम्पिया टोकियो 2020-2021
खेल ओलम्पिक २०२०-२०१२
बस यात्रा - बस यात्रा
नदी क्रूज राइन मेन मोसेले
जर्मनीमा कोरोनाभाइरस केसहरूको नक्शा
नक्सा कोरोनाभाइरस केसहरू विश्वव्यापी रूपमा
मोर्गनपोस्ट.डे न्यूस्टिकर कोरोना
यात्रा बीमा अनलाइन यात्रा बीमा
भाडाको कार बुक गर्नुहोस्
Premnitz र रथेनो मा स्वागत छ!
सेवा हटलाइन +49 3386 210//२०१० ११०
को कारणले कोरोना संकट हामीले तपाईंको लागि विशेष हटलाइन सेटअप गरेका छौं जहाँ हामी तपाईंको यात्राको कार्यान्वयन र रद्द गर्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छौं।
हामीलाई कल दिनुहोस् वा व्हाट्सएप मार्फत हामीलाई लेख्नुहोस्।
भर्खरको यात्रा समाचारहरू
नि: शुल्क पुन: बुकिंग र रद्द 3। डिसेम्बर 2020
दुबई विश्वको सब भन्दा अग्लो होटल निर्माण गर्दैछ 16। नोभेम्बर 2020
क्यानरी टापु - प्रवेशमा नकारात्मक कोरोना परीक्षा अनिवार्य 2। नोभेम्बर 2020
संघीय विदेश कार्यालयले क्यानरी टापुहरूको लागि यात्रा चेतावनी हटायो 26। अक्टोबर 2020
विश्व २०२० मा सब भन्दा सुन्दर समुद्र तटहरू 28। सेप्टेम्बर 2020
यात्रा चेतावनी बिना देशहरू 18। सेप्टेम्बर 2020
Other 38 अन्य देशहरूको लागि यात्रा चेतावनी खसालिनु पर्छ 17। सेप्टेम्बर 2020
यी जर्मनी मा सब भन्दा लोकप्रिय बाइक पथ हो। 7। सेप्टेम्बर 2020
बल्गेरियाको सुनौलो बालुवामा छुट्टी फेरि सम्भव छ 25। अगस्ट 2020
भ्याकेसन डेनमार्क - न्यूनतम बसाई बिना फेरि सम्भव डेनमार्कको यात्रा 19। अगस्ट 2020
तपाइँको यात्रा एजेन्सी Premnitz - रथेनो र सबै ब्रान्डनबर्गमा
यो सन् १ 1998 XNUMX since देखि नै भएको छ ट्राभल एजेन्सी Premnitz र त्यो रथेनो ट्राभल एजेन्सी। तपाईंको ट्राभल एजेन्सी नजिकैका रूपमा, हामी तपाईंलाई तपाईंको सबै यात्रा आवश्यकताहरूमा सल्लाह दिनेछौं र अनुपम सेवा, सल्लाहमा विशेषज्ञता, छुट्टी क्षेत्रहरूको बिभिन्न प्रकारको विस्तृत ज्ञान र हाम्रो यात्राको लागि हाम्रो विशाल जोशको प्रस्ताव गर्नेछौं! हाम्रा ग्राहकहरू राथेनो र प्रिमनिट्जबाट मात्र आएका छैनन् ब्रेन्डेनबर्ग र सम्पूर्ण हवलल्याण्ड।
हामी फोनमा तपाईलाई सल्लाह दिन इच्छुक हुन्छौं, ईमेलबाट वा प्राथमिकताका साथ, सिटी सेन्टरको रथेनोमा हाम्रो दुई अफिसमा र बर्गस्ट्रस 46 XNUMX (ब्रान्डनबर्ग राज्य) मा प्रेमनिटिजमा।
विशेष सेवाको रूपमा, तपाईं निश्चित ग्राहक अपोइन्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ! त्यसोभए तपाईं पछाडि बस्न र आराम गर्न सक्नुहुन्छ र समय दबाब बिना सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई तपाईंको उपयुक्त नियुक्ति समयको साथ ईमेल पठाउनुहोस् mail@reisecafe-premnitz.de वा हामीलाई 03386 210110 मा कल गर्नुहोस्।
तपाईं हाम्रो वेबसाइट मा यात्रा मा धेरै अलग सेक्सनहरु पाउनुहुनेछ। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्न हिचकिचाउँदैनौं।
तल प्याकेज भ्रमण तपाईं फरक बुकिंग ईन्जिनहरू पाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईं भिन्न देख्न सक्नुहुनेछ प्रस्ताव उदाहरणका लागि क्षेत्र प्रदर्शन गर्न सक्दछ। अन्तर्गत सबै समावेशी वर्तमान यात्रा प्रस्तावहरू प्रदर्शित छन्। कोटी अन्तिम मिनेट तपाईंलाई यात्रा गन्तव्यहरूको सूची प्रदान गर्दछ जुन हाल उपलब्ध छन्। यदि तपाईं बिभिन्न फिल्टरहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं पूर्ण यात्रा लिन सक्नुहुनेछ वा केवल एक अनलाइन होटल बुक गर्नुहोस्। अन्तिम बिन्दु अन्तर्गत जर्मनीमा छुट्टी तपाईले १ individual वटा संघीय राज्यहरूको छोटो वर्णन पाउनुहुनेछ प्रत्येक लिंक राज्यको लागि थप दृश्यहरू र छुट्टी गन्तव्यहरूको लिंकको साथ।
किन तपाईं एक नगर्नुहोस् क्रूज! बिभिन्न बिच छनौट गर्नुहोस् आईडा प्रस्ताव गर्दछ वा भर्खरको पाउनुहोस् आइडा अन्तिम मिनेट क्रूज हेर्नुहोस्। को एडा क्रूज विभिन्न संचालन गर्दछ मार्गहरू विश्वव्यापी संग आईडा वरियो ट्यारिफ मा रहनुहोस् जहाज यात्रा केहि चाहिएको छैन।
तपाईं लगातार फ्लायर हुनुहुन्छ र व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको यात्रा गन्तव्यहरू खोजी गर्न रुचाउनुहुन्छ। हामी पुस्तक तिनीहरूको तालिकाबद्ध उडान वा चार्टर उडान उनको लागि। तपाईं सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन जाँच लामो प्रतीक्षा समय को बिना तपाइँको ले उडान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ।
ट्राभल एजेन्सी प्रेमनिट्ज र ट्राभल एजेन्सी रथेनो (ल्यान्ड ब्रानडेनबर्ग) को अर्को विशेषता खेलकुद यात्रा हो। यदि तपाईंसँग छ भने यात्रा लाई जापान टोक्यो २०२१ मा ओलम्पिक खेलहरू व्यक्तिगत प्रतियोगिताको लागि टिकट सहित योजना बनाउँदै, हामी तपाईंको लागि सही सम्पर्क छौं। लागि यूईएफए यूरोपीयन फुटबल चैम्पियनशिप २०२१ हामी तपाईंलाई उडानको साथ संयुक्त प्याकेज प्रस्ताव गर्न सक्छौं, होटल र व्यक्तिगत खेलहरूको लागि टिकट प्रस्ताव गर्दछ।
Premnitz रथेनो ब्रान्डनबर्ग लिंकहरू
जर्मन पर्यटन संघ
पर्यटन क्षेत्र बाट महत्वपूर्ण सर्तहरू
All सबै समावेशीको अर्थ के हो?
सबै समावेशीले खाना मात्र होइन सबै स्थानीय मादक र गैर-मादक पेय समावेश गर्दछ।
Last अन्तिम मिनेट भनेको के हो?
तपाईंको यात्राको सुरूवात भएको तीन महिनादेखि दुई हप्ता सम्म अन्तिम मिनेट बुक गर्नुहोस्। यस अवधिमा सस्तो बाँकी स्थानहरू वा रद्द स्थानहरू बुक गर्न सम्भावना हुन्छ।
Package प्याकेज यात्रा के हो?
यदि उडान र होटल पहिले नै टुर प्राइजमा सम्मिलित छन् र टूर टुर अपरेटरले आयोजना गरेको छ भने, यसलाई प्याकेज यात्रा भनिन्छ। प्याकेज भ्रमणका थप सेवाहरू होटेलमा हस्तान्तरण वा सबै समावेशी भोजन पनि हुनसक्दछ।
✅ ट्राभल एजेन्सी Premnitz - रथ्नो खुल्ने समय?
सोमबारदेखि शुक्रवार बिहान 9.00 बिहान 18.00 बिहान Saturday साँझ बिहान 9.00 देखि १२ बजेसम्म आइतवार बन्द रहन्छ।
ट्राभल एजेन्सी Premnitz
Bergstrasse, 46,14727, १XNUMX२XNUMX Premnitz
रथेनो ट्राभल एजेन्सी
शहर केन्द्र, १14712१२ रथेनो
फेसबुक यात्रा क्याफे
ट्विटर यात्रा क्याफे
Instagram यात्रा क्याफे
यूट्यूब यात्रा क्याफे
गर्भपतनद्वारा संचालित WordPress | विषय: सिडनी एम्स द्वारा